Tanylemaka, Flatland, Malagasy edition por Edwin A Abbott (Tapa blanda) | Peter Books
Flatland, Malagasy edition
Ity sangan'asa momba ny siansa sy matematika ity dia satire tena mahafinaritra ary mampientam-po izay nahafinaritra ny mpamaky nandritra ny 100 taona mahery.
Izy io dia mamaritra ny dia ny lalan'ny kianja, matematika ary mponina amin'ny lemaka roa dimensional, izay misy vehivavy-manify sy mahitsy - ireo ambany endrika ambany indrindra, ary ny toerana misy ny lehilahy dia mety manana endrika, miankina amin'ny sata ara-tsosialiny.
Amin'ny alàlan'ireo fisehoan-javatra hafahafa izay mampifandray azy amin'ny endrika endrika geometrika, ny fizaran-kianjana dia misy fahatomombanana eny amin'ny habakabaka (telo hakiho), tany misy zoro (dimension iray) ary toerana misy teboka (tsy misy refy) ary amin'ny farany dia entin'ny eritreritra mitsidika tany efatra dimension - hevitra iray miova hevitra iray izay hiverenany any amin'ny tontolony roa dimensional. Ny tany Flat dia tsy vakiteny mahafinaritra fotsiny, fa fampidiran-dresaka voalohany amin'ny fiheverana ny haben'ny habaka marobe. "Manabe sy mampientam-po ary mandrisika ny saina."